Paul Pogba Oo Ogaaday Xiddiga Dhaxlaya Booskiisa Manchester United Xilli Uu Bixitaan Isku Diyaarinayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaPaul Pogba Oo Ogaaday Xiddiga Dhaxlaya Booskiisa Manchester United Xilli Uu Bixitaan Isku Diyaarinayo
Paul Pogba Oo Ogaaday Xiddiga Dhaxlaya Booskiisa Manchester United Xilli Uu Bixitaan Isku Diyaarinayo
Xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa kusii dhowaanaya in uu ka baxo Manchester United iyadoo uu gelayo sannadkii ugu dambeeyey heshiiskiisa Old Trafford, waana sannad uu heshiiskii hore dookh ahaan u siinayay United in ay kordhin karto.
Marka la gaadho xagaaga soo aaddan, Manchester United ma haysato doorasho kale oo aan ahayn in ay iibiso ama ay sii haysato sannadka u hadhsan, kaddibna uu bilaash kaga baxo sannadka dambe.
Manchester United oo dhowaan magacowday John Murtough oo ah agaasimaha ciyaaraha ee kooxda oo markii ugu horreysay xilkaasna soo kordhisay, kuna ladhay Darren Fletcher, ayaa ka shaqaynaya sidii ay kooxda u keeni lahaayeen beddelka Paul Pogba.
Waxa kale oo labadan masuul hor-taalla shaqo kale oo adag oo ah in ay helaan weeraryahan tayadiisu sarrayso oo beddela Edinson Cavani oo sannadkii heshiiskiisa United uu dhamaanayo, isla markaana ku wargeliyey in uu tegi doono.
Sergio Aguero ayaa ah ciyaartoyga afka hore ee warbaahintu tilmaamayso in uu Man United iman doono, laakiin waxa isweydiintu tahay ciyaartoyga beddeli doona Paul Pogba.
Sida uu qoray wargeyska MEN, Paul Pogba ayaa ogaaday laacibka ay Manchester United u doonayso in ay ku beddesho oo uu booskiisa galo marka uu isagu ka tago xagaagan ama midka xiga oo uu si xor ah u dhaqaaqi doono.
Wargeysku waxa uu sheegay in laacibka Faransiiska ah ee da’da yar ee Edouard Camavinga ay Manchester United doonayso, isla markaana uu Paul Pogba ka ogaaday laacibkan oo ay xulka qaranka Faransiiska u wada ciyaaraan.
Si kastaba, Camavinga ayay doonayaan kooxo kale oo ay ka mid tahay Real Madrid, halkaas oo uu joogo Zinedine Zidane oo uu da’yarkani doonayo in uu ka hoos ciyaaro.